မြသန်းတင့် (၁၉၂၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၃ - ၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈) သည် ဗမာလူမျိုး စာရေးဆရာနှင့် ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားသူတဦး ဖြစ်သည်။
(1929-05-23)၂၃ မေ၊ ၁၉၂၉
မြိုင်မြို့၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ ဗြိတိသျှဘားမား
၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၁၉၉၈(1998-02-18) (အသက် ၆၈)
ဘာသာပြန်၊ ဝတ္ထုတို၊ စိတ်ကူးယဉ်အချစ်ဇာတ်လမ်း
ဓားတောင်ကိုကျော်၍ မီးပင်လယ်ကိုဖြတ်မည် (၁၉၇၃)
အမျိုးသား စာပေဆု - ဘာသာပြန် (၁၉၇၂၊ ၁၉၇၈၊ ၁၉၈၉၊ ၁၉၉၃၊ ၁၉၉၅)
ငယ်စဉ် ၁၉၄၃ခုနှစ်တွင် အာရှလူငယ်အဖွဲ့၌တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၄ ခုနှစ်တွင် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး မြေအောက်ကလာပ်စည်းများနှင့် ဆက်သွယ်၍ ဖက်ဆစ်တော် လှန်ရေးကြီးတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဂျပန်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်း စစ်ကိုင်းရှိ ဗိုလ်သန်းဦး (တော်လှန်ရေးတွင် ကျဆုံး)၊ သခင်မောင်တင်(ပြည်တွင်းစစ်တွင် ကျဆုံး) နှင့် မြိုင်မြို့ ဘုန်းတော်ကြီး ဦးစရိယ (မြိုင်ဖဆပလအမတ်ဟောင်း ဦးသက်ရှည်)တို့၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီး မန္တလေးခရိုင်၊ အထက်မြန်မာပြည် ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်တွင် အချိန်ပြည့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ သည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်သည်။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့နှင့် ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် ဥပဒေဘွဲ့တို့ကို ရရှိခဲ့သည်။
ကျောက်ပန်းတောင်းတွင် အက်တူး သခင်အုန်းဖေ (ပြည်တွင်းစစ်တွင်ကျဆုံး) နှင့်အတူ လယ်သမားများ သီးစားခ မပေးရေး တိုက်ပွဲ၊ လက်ငုတ်လယ်ပြန်ထွန်ရေးတိုက်ပွဲ၊ မြေရှင်ကြီးများ၏လယ်များကို အတင်းဝင်ထွန်ရေး တိုက်ပွဲများကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သီးစားခမပေးရေး တိုက်ပွဲတွင် အင်္ဂလိပ် အစိုးရသိမ်းယူထားသော လယ်သမားများ၏ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်လုယူသည့်အတွက် (ရုံးမင်းတစ်ထိုင်) အပြစ်ဒဏ်ကျ ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ မြင်းခြံခရိုင်တွင် တခြားသော ခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ မြသန်းတင့်ခေါင်းကို ဖြတ်နိုင်လျှင် ဆုငွေပေးမည်ဟု အင်္ဂလိပ်အလိုတော်ရိနှင့် မြေရှင်တို့က တိတ်တဆိတ် ဆုငွေ ထုတ်ခဲ့သည်။ အထွေထွေ သပိတ်ကြီးတွင် မြင်းခြံ၊ မန္တလေး၊ ဒလသင်္ဘောကျင်း အလုပ်သမားထုကြီး ပါဝင်ရေးအတွက် တာဝန်ယူခဲ့သည်။ မြင်းခြံခရိုင် အလုပ်သမားသမဂ္ဂနှင့် လယ်သမားသမဂ္ဂတို့တွင် အလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရင်း ဖြူးမြို့တွင်ကျင်းပသည့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဖြူးလယ်သမား ကွန်ဂရက်ကြီးသို့ မြင်းခြံခရိုင် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက် ရောက်ခဲ့သည်။
၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးရေးသည့် 'ဒုက္ခသည်' ဝတ္ထုကို တာရာမဂ္ဂဇင်း (အတွဲ-၃၊ အမှတ် ၂၁)တွင် ပုံနှိပ် ဖော်ပြခြင်းခံရသည်။ ၁၉၅ဝ ပြည့်နှစ်တွင် စာပေသည် ပြည်သူ့ အတွက်ဟူသော ကြွေးကြော်သံဖြင့် 'စာပေမဂ္ဂဇင်း'ကို ကိုသန်းတင့်၊ ဒဂုန်တာရာ၊ မောင်ကြည်လင်၊ အောင်လင်း၊ ကျော်အောင်တို့နှင့်အတူ ဦးဆောင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၁၉၅၁ ခုနှစ် တွင် ဂေါ်ကီ၏ 'မာလိဖောနှင့်အခြားဝတ္ထုတိုများ'ကို ပထမဆုံး ဘာသာပြန်ဆို ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်။
၁၉၅၅ ခုနှစ်က သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ဦးဆောင်သော ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုကော်မတီတွင် အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ကွန်ဂရက် (မြန်မာနိုင်ငံ) အတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် ဩစတြီးယားနိုင်ငံ၊ ဗီယင်နာမြို့တွင် ဌာနချုပ်တည်ရှိသည့် 'ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ'၏ ဗျူရိုအဖွဲ့ဝင် လူကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။
မြသန်းတင့်၏ထင်ရှားသော ပင်ကိုရေးဝတ္ထုများမှာ မေတ္တာအသင်္ချေ၊ လိုက်ခဲ့တော့မြနန္ဒာ၊ အမှောင်ရိပ်ဝယ်၊ ဆယ်ကြိမ်မြောက် အလည်ရောက်ခြင်း၊ နှင်းနု၊ မမ၊ နွံထဲက ကြာ၊ ထားကျွန်မလင်၊ ဓားတောင်ကိုကျော်၍ မီးပင်လယ်ကို ဖြတ်မည်၊ လေညင်းနှင့်လရောင်၊ ဆယ်ကြိမ်မြောက် အလည် ရောက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပြီး နေထွက်သောည (ပြဇာတ်)ကိုလည်း ရေးသားခဲ့သည်။
ဗြိတိသျှ တို့ထံမှ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သော ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် မြသန်းတင့် သည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် တွင် ပညာဆည်းပူးခဲ့ပြီးနောက် ဒဿနိက ၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ နှင့် အင်္ဂလိပ် အနုစာပေ စသော ဘာသာရပ်များဖြင့် ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါ သည်။ တာရာ မဂ္ဂဇင်း (အမှတ်စဉ် ၂၁ ၊ အတွဲ ၃ ၊ ၁၉၄၉) ၌ “ဒုက္ခသည်” ဟူသော သူ၏ ပထမဦးဆုံး ဝတ္ထုတိုဖြင့် မြသန်းတင့်သည် စာပေနယ်သို့ ၁၉၄၉ တွင် စတင်ဝင်ရောက် ခဲ့ပြီး သူ၏ စာရေးသက်အနှစ် ၅၀ အတွင်း ဝတ္ထုတိုနှင့် ဝတ္ထုရှည်များ၊ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ များစွာ နှင့် ဘာသာပြန် ဆိုရေးသား မှုများကို ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၁၉၇၃ တွင် ရေးသားခဲ့သော ဓားတောင်ကိုကျော်၍ မီးပင်လယ်ကို ဖြတ်မည် ဟူသော ဝတ္ထု သည် သူ၏ အကြီးကျယ်ဆုံး သော ပြောင်မြောက်သည့်လက်ရာဟုယူဆပြီး သူသည် “တောင်သမန် ရွှေအင်းကလေညင်းဆော်တော့” ကဲ့သို့သော သမိုင်းဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ များကိုပါ ရေးသားခဲ့ပါသည်။ အနောက်တိုင်း စာပေများစွာကို မြန်မာဘာသာသို့ အရေးသွက်သွက်ဖြင့် ဘာသာပြန်ဆို ရေး သားသူဖြစ်သည့်အလျောက် မြသန်းတင့်သည် စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ၊ လေရူးသုန်သုန် ၊ ခန်းဆောင်နီ အိပ်မက် ကဲ့သို့သော ကမ္ဘာ့ဂန္ထဝင်စာအုပ်များနှင့်သူ၏ စာဖတ်ပရိသတ် များကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ သည်။
မြသန်းတင့်သည် ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် အာဏာသိမ်းယူခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်ကြီː နေဝင်း ၏ စစ်အစိုးရ လက်ထက်တွင် ၁၉၆၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၂ ခုနှစ်ထိ အကျဉ်းကျခံရသည်။ ကနဦး ရန်ကုန် အင်းစိန်ထောင်တွင် နေခဲ့ရပြီး ၁၉၆၉ ခုနှစ်မှ ၎င်းလွတ်မြောက်သည့်အချိန်ကာလအထိ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ ရှိ ပြစ်ဒဏ်ပေး ခြင်းခံရသူများကို တစ်နေရာတည်းတွင်ထား ရှိသည့် ကိုးကိုးကျွန်း တွင် ၃ နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ရ သည်။
၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ ည ၉ː၁၅ တွင် ဦးနှောက်၌ သွေးယိုစီးသည့်ရောဂါဖြင့် ရန်ကုန်မြို့၌ ကွယ်လွန်သည်။ ဆုံးပါးချိန်တွင် ဇနီး ဒေါ်ခင်မမ နှင့် သားသမီးလေးဦး ကျန်ရစ်သည်။
ကွန်လွန်ချိန်၌ အောက်ပါစာအုပ်များမှာ ရေးသားဆဲ ဖြစ်သည် −
မြသန်းတင့်ရေးသားခဲ့သည့် ကျော်ကြားသော မြန်မာဝတ္ထုများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
ဓားတောင်ကိုကျော်၍ မီးပင်လယ်ကို ဖြတ်မည် (၁၉၇၃)
လိုက်ခဲ့တော့ မြနန္ဒာ (၁၉၆၀)
တောင်သမန် ရွှေအင်းက လေညင်း ဆော်တော့ (၁၉၉၉)
သူ၏ ဝတ္ထုတိုများကို စုစည်းထုတ်ဝေသော အညတရရုပ်ပုံလွှာ (သာမန်လူတို့၏ ပုံရိပ်များ) အမည်ရှိ ဝတ္ထုတို ပေါင်းချုပ် စာအုပ်ကို မန္တလေးသို့ သွားသောလမ်း တစ်လျှောက်ဝယ် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုရေးသားခဲ့သည်။
မြသန်းတင့် ရေးသားခဲ့သည့် စာအုပ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
၁ စစ်နှင့် ငြိမ်ချမ်းရေး ၁၂ အုပ်တွဲ War and Peace လီယိုတော်စတွိုင်း ၁၉၇၂ အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဘာသာပြန်စာပေဆု
၂ လေရူးသုန်သုန် ၁၉၇၈ ၂ အုပ်တွဲ Gone with the Wind Margaret Mitchell ၁၉၇၈ အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဘာသာပြန်စာပေဆု
၃ ပါရီကျဆုံးခန်း ၃အုပ်တွဲ The Fall of Paris Ilya Ehrenburg
၄ ရွှေပြည်တော်မျှော်တိုင်းဝေး ၈အုပ်တွဲ The Far Pavillions M. M. Kaye
၅ လေလွင့်သူ - The Catcher in the Rye J. D. Salinger
၆ မိန်းမတို့ အကြောင်း ၂ အုပ်တွဲ The Second Sex Simone de Beauvoir
၇ ခန်းဆောင်နီ အိပ်မက် ၉အုပ်တွဲ Dream of the Red Chamber Cao Xueqin ၁၉၈၈ အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဘာသာပြန်စာပေဆု
၈ သုခမြို့တော် ၂အုပ်တွဲ The City of Joy Dominique Lapierre ၁၉၉၂ အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဘာသာပြန်စာပေဆု
၉ အချစ်မိုးကောင်းကင် ၂ အုပ်တွဲ Beyond Love Dominique Lapierre ၁၉၉၅ အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဘာသာပြန်စာပေဆု
၁၀ လွမ်းမောခဲ့ရသော တက္ကသိုလ်နွေညများ ၃အုပ်တွဲ The Class Erich Segal
၁၁ လူများသက္ကရာဇ်နှင့် ဘဝ ၅အုပ်တွဲ People, Years, Life Ilya Ehrenburg
၁၂ ဧကရီဖွားစော - She WasaQueen Maurice Collis
၁၃ ချစ်သောယွန်းခင်ခင် - The Lacquer Lady F. Tennyson Jesse
၁၄ အရွယ်မတိုင်မီ - The Childhood of Maxim Gorky Maxim Gorky
၁၅ ဘုံလေ့တခွင် - My Apprenticeship Maxim Gorky
၁၆ ဘဝတက္ကသိုလ် - My Universities Maxim Gorky
၁၇ မက္ကဇင်းဂေါ်ကီ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ - The Life of Maxim Gorky A. Roskin
၁၈ ခေတ်သစ် ပုတ္တောဝါဒ - A Father's Book of Wisdom H. Jackson Brown Jr.
၁၉ ဂျူပီတာဖိုက် - Jupiter Five Arthur C. Clarke
၂၀ စာရေးခြင်း အတတ်ပညာ - The Art of Writing Andre Maurois
၂၁ တိမ်းရှောင်သူ − The Fugitive Rabindranath Tagore
၂၂ ဘဝနေနည်း အနုပညာ - The Art of Living Andrew Maurois
၂၃ မှောင်မိုက်မှာ ငို - The Man Who Was Afraid Maxim Gorky
၂၄ မှော်ရုံတောမှာ မောလှပြီ - The Gold of Their Bodies Charles O. Gorham
၂၅ ရေပွက်ပမာ - A Very Easy Death Simone de Beauvoir
၂၆ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် - Teahouse Lao She
၂၇ လာခြင်းကောင်းသော အရှင် - The Lord Comes Robert Payne
၂၈ လူကလေးသို့ ပေးစာများ - Lord Chesterfield's Letters to His Son and Others Earl of Philip Dormer Stanhope Chesterfield
၂၉ အကြာဆုံးစစ်ပွဲ မြန်မာပြည် - Burma: The Longest War, 1941-1945 Louis Allen
၃၀ မာ့က်စ်ဝါဒနှင့် တွေးခေါ်မျှော်မြင်ရေး Theory of Knowledge Maurice Cornforth
၃၁ သမိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ဝါဒ Historical Materialism Maurice Cornforth
၃၂ အနုပဋိလောမ ရုပ်ဝါဒ [အလုပ်သမားလူတန်းစား အဘိဓမ္မာ]
Dialectic Materialism and Science (1949)
Materialism and the Dialectical Method (1953)
၃၃ ခေတ်သစ်သမိုင်းဋီကာ What is History? E.H.Carr
၃၄ မိုးအဆုံး မြေအဆုံး Chinghing Aitmatov Jamila
၃၅ တောင်များ၏ တောင်ဖက်မှ ပင်လယ်များ၏ မြောက်ဖက်သို့ The Long Revolution Edgar Snow
၃၆ မီးလောင်မြေ Scorched Earth Edgar Snow
၃၇ ခေတ်ပေါ်နိုင်ငံတကာကဗျာရှည်သုံးပုဒ် (မောင်သစ်တည်) အမည်ဖြင့်
၃၈ ကမ္ဘာမြေကြီးသည် နတ်ဥယျာဉ်မဟုတ် (ထက်အောင်) အမည်ဖြင့်
၃၉ တော်စတွိုင်း၏ ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်စာတန်း
၄၀ ဒီရေမြင့်သစ် (သို့) မော်စီတုန်းနှင့် တရုတ်တော်လှန်ရေး The Morning Deluge: Mao Tsetung and the Chinese Revolution Han Suyin
၄၁ တွိုင်ဘီ-အီကေဒါ ဆွေးနွေးခန်း မောင်သာမည နှင့် တွဲဖက်၍ ရေးသည်
၄၂ ပြိုကွဲသွားသော သိုက်မြုံကလေးနှင့် အမေ့သား The Broken Nest and Rashmani's Son Rabindranath Tagore
၄၃ နွံထဲကကြာ သိန်းဖေမြင့် နှင့် တွဲဖက်၍ ရေးသည်
၄၅ ဇာခန်းဆီး လေညှင်းနှင့်လရောင်
၄၆ တောင်သမန်ရွှေအင်းက လေညှင်းဆော်တော့ ၁၉၉၉ ၂အုပ်တွဲ
၄၇ ခန်းဆောင်နီထဲတွင် အိပ်မက်မက်ကြည့်ခြင်း
ရှားလော့ဟုမ်း(စ်) ဇာတ်လမ်းတွဲကို အတွဲ ၅ တွဲ ရေးသားပြုစုခဲ့သည်-
သန်းထွန်းအောင်၊ အောင်မြင့်နိုင်၊ "မြသန်းတင့်ရေးခဲ့သော စာစုစာရင်း"၊ အမှတ်တရစာအုပ်တိုက်၊ မန္တလေး။
ယနေ့မန္တလေး စာတည်းအဖွဲ့၊ "စာပဒေသာဥယျာဉ်မှူးကြီး မြသန်းတင့် အမှတ်တရ"
Book review: On the Road to Mandalay
On the Road to Mandalay: Tales of Ordinary People Archived 14 May 2011 at the Wayback Machine.
www.myanmarisp.com/Writer-Biography/myathantint Archived 29 July 2009 at the Wayback Machine.